Sidee ku saabsan ammaanka dadka waaweyn ah fuushan mooto korontada? - Jomo Technology Co., Ltd
Haddaba mootooyinka korontada waxa uu noqday dooqa caan ah firaaqada iyo taam ahaanshihiisa. Dadka dhallinyarada ah fuushan ah mooto dheelitirka korontada , ku gudan karaan awoodda dheelitirka iyo reflex, iyo kor u qaadi kartaa horumarka cerebellum iyo kor u qaado horumarka maskaxda, kor loogu qaado wareegga wadnaha. In geeddi-socodka of fuushan guddiga dheelitirka korontada , maxaa yeelay, waxaad u baahan tahay si ay u ilaaliyaan dheelitirka ee muruqa kasta qayb ka mid jidhku waa ku jira xaalad ah dhaqdhaqaaq aad u daran, dheelitirka guud iyada oo dhaqdhaqaaqa, in baaqbaaq ay dareenka iyo xawaaraha reaction, kordhin dabacsanaan ka mid ah jirka, loo hagaajiyo jimicsiga jirka, kor u sirdoonka, sidaas oo kale ayaa mooto is miisaamid dhaqdhaqaaqa waxaa sidoo kale loo yaqaan "ciyaarta xujo", waxaa beeri kara iyo in la wanaajiyo dadka dhallinyarada ah si firfircoon, kalsooni, madax bannaan, xoog, shakhsiyadda dagaal badan.
Tixgelinta koowaad waa ammaanka dadka waaweyn, kaas oo sidoo kale waa furaha ah inay taageero qoyska, iyo mooto is miisaamid korontada aad soo iibsatay haddii maray shahaadada UL 2272 ama ma, maxaa yeelay taasi waxay go'aamiso ammaankeeda.
1. hoverboard is miisaamid dhaqdhaqaaqa si xoog leh loo xakameeyo awoodda dheelitirka jidhka, taas oo ka dhigaysa murqaha lugta inuu ka soo kabsado iyo in la wanaajiyo si weyn, waqti isku mid ah, cagtu waa qodobada ugu badan oo ka mid ah qaybo ka mid ah jidhka bini'aadamka, iyo hooseysa saxan cagta ee khilaaf sii wadaan in ay kicin ah Self Dheelitirka mooto ku fuushaa, waxay heli karaan kicinta acupoint, wanaajiyo shaqada xubnaha.
2. In geeddi-socodka saaran gaadiid ah, ay sabab u tahay dheelitirka ilaaliyaan, qaybaha kala duwan ee muruqyada jidhka kacsan, ka dhigi kara garabka, dhexda, lugta, curcurka, dhabarta iyo kala-goysyada oo kale ayaa la hagaajiyey. Si aad wax ku ool ah la xoojiyo shaqada lugta, iyo si ay u ilaaliyaan oo ay dabacsanaan.
3. saaran gaadiid muddo dheer kor u qaadi kartaa dheelitirka awoodda maskaxda iyo reflex dareemaha, si weyn u hagaajin kartaa tayada hurdo, firfircoon, full of koboca dhallinyaro ah, anti-gabowga, wax ku ool ah looga hortago dhacdo ee cudurka Alzheimers.
4. Electric mooto dheelitirka saamayn taam isboortiga, laakiin sidoo kale si wax ku ool xakamayn kartaa miisaanka, looga hortago cayilka.
5. dhaqdhaqaaqa baabuur dheelitirka Electric ma aha oo kaliya a sports waxtar leh, ama hawlaha bulshada xarrago leh, ka dhigi kartaa saaxiibo cusub, si ay u fuliyaan noocyada kala duwan ee hawlaha, loo kobciyo content nolosha, la baabi'iyo iyo in la yareeyo caadooyinka xun.